पूर्वलडाकु निर्मला,नारकीय जीवन बिताउँदै!! – News Nepali Dainik
पूर्वलडाकु निर्मला,नारकीय जीवन बिताउँदै!!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २३, २०७७ समय: ७:२१:०३
आठ वर्षीय जीवन विक घरको सुरमा उभिएर ‘मलखाद’ माथि बसेकी अचेत आमाको पीडा हेर्ने गर्छन। आमाको जलेको खुट्टा अनि अशक्त अवस्था देख्दा उनी भक्कानिन्छन्। तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वमा घरपरिवार त्यागेर पूर्वलडाकु ३२ वर्षीया निर्मला विक ‘साधना’ तीन वर्षदेखि अचेत छिन्। उनी बेलुका अँध्यारो बढ्दै जाँदा बाख्रा र कुखुरासँगै गोठमा सुताइन्छिन् अनि बिहान तिनै घरपालुवा पशुपन्छीसँगै बाहिर सारिन्छिन्। त्रिवेणी ५ जुगार जबरबोटकी निर्मला आठ वर्ष अगाडि रोगले थलिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
Last Updated on: February 5th, 2021 at 7:21 am